कृषिमा रोजगारीको सृजना आजको आवश्यकता - Online Majdoor
कृषिमा रोजगारीको सृजना आजको आवश्यकता
विचार विशेष समाचार समाज साहित्य
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिने ओली सरकारले यो वर्ष किसानलाई खेतीको समयमा मल पनि उपलब्ध गराउन सकेन । मलको असर एउटा परिवारलाई मात्र पर्ने होइन, देशको उत्पादनमा नै प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । समयमा मल नल्याउने ठेकेदारहरूलाई केही करोड जरिवाना गरेको प्रचार गरियो । वास्तवमा त्यो देश र जनताकै विरोधमा गरिएको जघन्य अपराध हो । ठेकेदारहरूलाई अपराधअनुसार दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने हो तर राजनैतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का पाएका जनविरोधी ठेकेदारहरूलाई अत्यन्त न्यून सजाय ग¥यो । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अपराधअनुसारको सजाय न्यायको सिद्धान्त हो । ठेकेदारहरू कति इमानदार पनि होलान् तर पटक—पटक परीक्षणमा अयोग्य प्रमाणित भएकाहरूलाई नै ठेक्का दिनुमा राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । त्यसैले यो वर्ष मलको कारण जति धान उत्पादन घट्नेछ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदारहरूलाई बनाउनुपर्छ र क्षतिपूर्ति तिनीहरूबाटै भराउनुपर्छ ।
मलको समस्या नेपालको स्थायी समस्या जस्तै भएको छ तापनि हाम्रा मन्त्रीहरू समाधान खोज्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिंदैनन् । जति कृषिमन्त्रीहरू आएपनि व्यक्तिगत फाइदा र सुविधामै केन्द्रित हुने गरेका छन् । मन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्रमात्र हेर्ने होइन, नयाँ – नयाँ कृषि नीतिबारे पनि सोच्नुपर्छ । बौद्धिक समुदायले उठाएको कुरा हाम्रा मन्त्रीहरूको लागि भालुलाई पुराण जस्तै भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खेल्न सुझाव दिँदै आएको हो । वर्षको करोडौँ कमिसन खान पल्केकाहरू विभिन्न बहाना बनाई विदेशबाट मल ल्याउनुलाई नै उत्तम विकल्प ठान्दै छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो समयमा र डा. युवराज खतिवडाले आ.व. २०७५÷७६ मा स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका थिए । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको मात्र होइन त्यो विषयले निरन्तरतासमेत पाएन । आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमा रु. ११ अर्ब मलका लागि अनुदान दिने व्यवस्था ग¥यो । आजभन्दा ५ वर्षअघि नै सन् २०१५ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनमा ७५ अर्बमा देशमा मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । जब कि विगत १० वर्षमा नेपालले विभिन्न देशबाट कूल १ खर्ब २८ अर्बभन्दा बढीको मल आयात गरेको तथ्याङ्क छ ।
स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना गरिए किसानले समयमा गुणस्तरीय मल पाउनेछन्, कृषि उत्पादन बढ्नेछ र नेपालमा बढी भएको मल विदेश निर्यात गरेर प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ । यसबारे सरकारमा बसेकाहरूले नबुझेको पक्कै होइन होला ।
अहिले कोरोनाको कारण विभिन्न देशबाट लाखौँ युवा नेपाल फकँदै छन् । उद्योगधन्दाको विकास नभएको हाम्रो देशमा रोजगारी दिन सकिने नेपालमा एउटै मात्र क्षेत्र कृषि हो । विभिन्न देशमा सिकेका ज्ञान र अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्ने यो राम्रो अवसर पनि हो । युवाहरूको श्रमशक्ति स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण तयार भएमा आर्थिकरूपले देश अगाडि बढाउन समय लाग्ने छैन । अब परम्परागत कृषिमा होइन, कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा विभिन्न देशले गरेका प्रविधिको विकास नेपालमा भिœयाउन ढिलो गर्नुहुन्न । युवाहरूलाई कृषिप्रति आकर्षित गरेर कृषि नै रोजगारको महत्वपूर्ण स्थल बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष योजना अगाडि सार्नु आवश्यक छ । युवाहरूलाई ५० डिग्रीको तापक्रममा अरबमा गएर काम गर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । कोरोना महामारीलाई देश विकासको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नेतर्फ जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
नेपालीहरूको लागि चाहिने चामल, दाल, मकै, गहुँ, फलफुलजस्ता अधिकांश वस्तुहरू भारतलगायत विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको छ । भारतले नेपाललाई कृषिमा मात्र होइन कुनै पनि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन दिनेछैन । किनभने, भारत नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा स्वीकार्न तयार छैन । वास्तवमा नेपाल कृषिमा अत्यन्त सम्भावना भएको देश हो । नेपालमा हिमाल पग्लेर बग्ने ठूलठूला हिमनदीहरू छन्, तराईमा समथर उर्वर भूमि छ, पहाडमा फलफुल खेतीको लागि उपयुक्त वातावरण छ । तर, भारतको विभिन्न दबाब र जालसाजीको कारण कृषिमा अत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । दक्षिणी सीमाको ठाउँ—ठाउँमा बाँध र तटबन्ध बनाएर भारतले नेपालको लाखौँ हेक्टर उर्वरभूमि जलमग्न बनाइदिएको छ । नक्कली मल पठाएर उत्पादन ध्वस्त पार्ने काम पनि भारतले गर्दै आएको छ ।
नेपालका मन्त्रीहरू भारतको सहमतिमा नियुक्ति हुन्छन् र उसैको इसारामा चल्छन् । अनि कसरी नेपालको विकास सम्भव होला ? नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको बारे कुरा उठाउँदा अर्थमन्त्रीहरू विद्युत्को अभाव देखाउँछन् । तिनीहरूलाई अब त्यो सुविधा प्राप्त छैन किनभने गएको चैत महिनामै विद्युत् खपत नभएर दैनिक २०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको प्राधिकरण नजिककाहरूले बताइसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अनुसार हाल नेपालमा १३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा अबको ३ वर्षमा ६ हजार मेगावाट उत्पादन हुनेछ । उत्पादनअनुसार माग हुनेछैन । अहिलेको स्थितिअनुसार त्यसबेलासम्ममा १७÷१८ सय मेगावाट मात्रै माग हुनेछ । समयमा बेच्ने बन्दोवस्त गर्न नसकेमा वर्षको १० खर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युत् खेर जानेछ । त्यस्तो हो भने मल कारखाना खोल्ने यो राम्रो अवसर हो । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
का. रोहितले ठिकै भन्नुभएको छ, यो सरकार ठगहरूको घेरामा छ । सरकार बिचौलियाहरूको घेरामा पनि छ । लकडाउनको बेला नेपाली किसानहरूले लगाएको करोडौँ मूल्य बराबरको तरकारी खेर गयो । कयौँ बिघा जमिनमा फलेको तरकारी नबिकेर तरकारी बारीमा किसान आफैले ट्रयाक्टर चलाएको नेपाली जनताले देखेका छन् । तर, भारतबाट आउने तरकारीलाई कहीँ रोकतोक छैन । लकडाउनको नाउँमा प्रहरीले नेपालकै एउटा जिल्लाको तरकारी अर्को जिल्लामा पठाउन दिएन । यो कस्तो सरकार ? आफ्नो उत्पादन रोक्ने तर विदेशको खुलमखुल्ला आयात गर्ने ?
कृषि विकासको लागि आएका अरबौँ अनुदानसमेत शासकहरूले भागबण्डा गरेर खाएको विश्व बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ । २०६६ सालदेखि विश्व बैङ्कको अनुदानमा सुरु भएको व्यवासायिक कृषि तथा व्यापार योजनामा ब्रम्हलुट भएको सो बैङ्कको छानबिनले देखाएको छ । अस्तित्व नै नभएको संस्थालाई करोडौँ अनुदान दिएको, कार्यालय सञ्चालनको काम गरेको देखाई दुई अर्बभन्दा बढी खर्च देखाएको, एकलाई देखाई अर्कोले अनुदान लगेकाजस्ता थुप्रै आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू सो बैङ्कले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्ता भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई सरकारले किन अहिलेसम्म कारबाही गरेन ? जनताको प्रश्न छ ।
वास्तवमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण रोक्न आवश्यक र त्यस्ता जमिनमा भौतिक संरचना वा सहर निर्माण रोकिनुपर्छ । तर, विडम्बना सरकार काठमाडौँ उपत्यकामै ४ वटा ठूला सहर बनाउने योजना ल्याउँदै छ । निजी क्षेत्रलाई आवास योजनाको अनुमति दिँदै छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले घर जग्गा कारोबारीहरूको दबाबमा अचानक कित्ताकाट खोल्यो । त्यसबेला मुख्य – मुख्य कम्पनीहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गरे । केही दिनपछि जनस्तरबाट चर्को विरोध आएको बहानामा फेरि कित्ताकाट रोक्ने निर्णय ग¥यो । त्यसैमा अरर्बौँको चलखेल भएको बताइन्छ ।
यसर्थ, वर्तमान सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भर हुने पाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसको लागि खेतीसँगै पहाडमा फलफुल खेती, दुग्ध उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र, जडीबुटी उत्पादन केन्द्रलगायत उद्योग स्थापना गरी कृषिमा व्यापक रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।
जनताको अर्थ के ?